जंगली चराहरू असीमित मा एक लुकेको चुचुरो | Martech Zone
जंगली चराहरूको असीमितमा लुकेको चुचुरो
बुधबार, सेप्टेम्बर 12, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
पछिल्लो केहि हप्ता काममा hour० घण्टा हप्ताको साथ, यो म्यापि project प्रोजेक्टमा अर्को २० वा add० थप्न चुनौती भयो जुन मैले जंगली चराहरूको असीमितको लागि गरिरहेको छु। भोलि ठूलो दिन हो, यद्यपि जब WBU ले यसको केही फ्रान्चाइजीहरू लाई कार्यक्षमता देखाउँदछ।
हामीले वास्तवमै यस साइटमा धेरै कार्यक्षमता निचोरेका छौं, र हामी अझ बढि आशा गर्दछौं। त्यहाँ एक मजबूत प्रशासकीय ब्याक-ईन्ड छ जहाँ स्टोरहरूले उनीहरूको आफ्नै जानकारी अपडेट गर्न वा तिनीहरूको भौगोलिक स्थान ट्वीक गर्न सक्छन्। केहि अन्य सुविधाहरू:
जियोआईपी स्थानीयकरण जुन मेट्रिक वा मानकमा प्रदर्शन गर्ने कि नगर्ने निर्धारण गर्दछ। जियोआईपीले तपाईंको स्थान र क्षेत्रको भविष्यवाणी गर्दछ र तपाईंलाई नक्सामा पृष्ठ अनुरोध गर्दै आइपी ठेगानामा प्लट गर्दछ।
कस्टम मार्करहरू मेरो डिजाईन थिए र लोड गरिएको छ, गतिको जाभास्क्रिप्टको साथ होइन, तर एक KML फाईलसँग! यो मार्कर लोड भए पछि पृष्ठ पृष्ठ छिटो प्रदान गर्दछ। जब तपाईं नक्सामा जानुहुन्छ, गुगलले पोइन्ट्स प्रदर्शन गर्ने ध्यान राख्दछ त्यसैले मसँग डाटाबेसको आवश्यकता पर्दैन।
जानकारी विन्डोजहरू संयोजन हो। यदि तपाईं नक्शामा क्लिक गर्नुहोस्, तिनीहरू KML फाईलबाट हुन्। यदि तपाईंले साइडबारमा स्थानहरूमा क्लिक गर्नुभयो भने, तिनीहरू नक्सासँग सम्बन्धित तहमा लोड हुन्छन्।
दिशाहरू पनि सामेल छन्, यदि तपाईंले राज्य वा प्रान्तको भन्दा अधिक ठेगाना प्रदान गर्नुभयो भने। यो पहिलो पटक हो जब मैले गुगल दिशाहरू वितरण गरेको छु, तर यो अति उत्तम छ। एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् ... मैले ठेगानाहरूलाई भू-कोडमा वास्तविक रूपमा पास गर्दिन, म केवल वास्तविक अक्षांश र देशान्तर थप गर्दछु र तिनीहरूलाई नामको साथ मास्क गर्दछ (यहाँ @ @ 43, -१२०)।
छवि विन्डोजमा छविहरू सक्षम भइसकेका छन्, तर हामीसँग वास्तवमा यस विन्दुमा कुनै पनि छविहरू बचत भएका छैनन्। A एक पटकमा एक कदम। यदि तपाईं एक नजर हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ जंगली चराहरू असीमित नक्शा। म भन्छु कि सफ्टवेयर बीटा जानको लागि अल्फा तयार छ एक पटक हामीले ग्राहकबाट शोधन अनुरोधहरू प्राप्त गर्यौं।
स्टीफनलाई विशेष धन्यवाद, उहाँ यसमा मेरो इंटर्न हुनुभयो र कामको हेक गर्नुभयो। उहाँ स्कुल इयरमा जर्मनी सर्नुभयो तर म उहाँसँग यस प्रोजेक्टमा कोड लागू गर्न अगाडि छु। WBU एक शानदार संगठन हो र संग काम गर्न पाउँदा खुसीको कुरा भयो। हामी यस प्रोजेक्टमा ओभर डेलिभरीको लागि तत्पर छौं, किनकि हामी यो अनुप्रयोगलाई PHP म्यापिpping अनुप्रयोग खोज्ने अन्य संस्थाहरूको लागि प्रयोग गर्ने आशा गर्दछौं। स्टीफन मेरो व्यापार साझेदार हुनेछ ... उच्च स्कूल मा एक केटा को लागी खराब छैन!
केही थप संसाधनहरू माइकको कोड उदाहरणका साथ साथै बेन, एक विकासकर्तासँग गरिएको छ रेयरबर्ड कसमा Google नक्सा को एक आश्चर्यजनक कार्यान्वयन निर्माण मा फ्यानिमेसन.
टैग: दिशाहरूगुगल नक्शा एपीआईम्यापिङनक्सास्टोर खोजकर्तास्टोर लोकेटर
Douglas Karr Wednesday, September 12, 2007 Sunday, October 4, 2015
म चाहान्छु सबै कार बिक्री विज्ञापनहरू यस्तै समाप्त भयो!
आईफोन भन्दा पातलो?
सेप्टेम्बर 13, 2007 मा 5: 03 AM
नमस्ते डग - यो परियोजना पूरा गरेकोमा तपाई र अन्य विकासकर्ताहरूलाई बधाई छ - म पक्का छु कि WBU स्टोर मालिकहरूले यसको कदर गर्नेछन्। तिनीहरूका अधिक र अधिक ग्राहकहरू (र सम्भावित स्टोर मालिकहरू एक फ्रान्चाइजी खरिद गर्न रुचि राख्ने) वेब मार्फत वाइल्ड बर्ड्स अनलिमिटेड फेला पार्छन्, यसले कम्पनीसँगको उनीहरूको प्रारम्भिक अनुभव सकारात्मक हुनु महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। नयाँ म्यापिङ कार्यान्वयन निश्चित रूपमा अघिल्लो स्थिर नक्साहरूमा सुधार हो। आशा छ यसले तपाइँको लागि नयाँ व्यवसाय सिर्जना गर्दछ - फेरि राम्रो काम।
सेप्टेम्बर 13, 2007 मा 9: 21 AM
यो निश्चित रूपमा पूर्ण जोशमा हेड गर्न थालेको छ। मलाई यसबाट अलग बनाउनु भएकोमा धन्यवाद। यो सधैं एक खुशी छ।
सेप्टेम्बर 13, 2007 बेलुका 9:06 बजे
म तपाईंलाई बताउन सक्दिन कि वाइल्ड बर्ड्स अनलिमिटेड फ्रान्चाइजीहरू कत्तिको प्रभावित थिए जसले आज यसको चुचुरो पाएका थिए! यो आधिकारिक रूपमा हाम्रो एजेन्डामा थिएन तर मैले यसलाई देखाउनको लागि दिनको सुरुमा केही मिनेट मागेँ। तिनीहरूले तुरुन्तै हाम्रो हालको स्टोर लोकेटरमा नाटकीय सुधारहरू पहिचान गरे। तिनीहरू विशेष गरी ड्राइभिङ दिशाहरूको कार्यक्षमतासँग खुसी थिए।
डग, तपाईसँग पनि काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। त्यहाँ जो कोही एक प्रतिभाशाली, समर्पित र ग्राहक-उन्मुख विकासकर्ता खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईसँग गलत हुन सक्दैन! सबै कडा परिश्रमको लागि धन्यवाद र तपाईंको टोलीलाई धन्यवाद। तपाईहरुले मलाई राम्रो देखाउदै हुनुहुन्छ।